निबन्ध Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by कोप्सु क्षितिज २२ फाल्गुन २०७७
प्रिय समय, तिम्रो अवस्थाको बारेमा म जानकार छु, तिमी मेरो हालतको हालखबरबारे अवगत छौ वा छैनौ मलाई थाहा भएन । यत्रो ठूलो ब्रह्माण्डको एउटा सानो ग्रहको, सानो देशको नगण्य मनुष्यको…
by prabhattimilsina १० अशोज २०७७
तपाईं मर्दै हुनुहुन्छ र डरलाग्दो पक्ष मृत्यु मात्र होइन ! यो त तपाईंको आउँदै गरेको मृत्युको प्रतिको भयावह जागरूकता हो जो डर बनेर तपाईंभित्र बसेको छ ! यो ग्रहमा अरू…
by सुषमा तिमल्सिना ३१ भदौ २०७७
आमाले बेला बेला आफ्ना जीवनका घतलाग्दा कुराहरु सुनाएर कहिले हामीलाई हँसाउने त कहिले रुवाउने गर्नुहुन्थ्यो। आमाले भनेको त्यस्तै एउटा कुरा म अहिले पनि सम्झिरहन्छु– त्यो बेला म बाह्र वर्षकी थिएँ…
भर्खरै मैले एउटा बडेमानको ऐना फुटाएको छु । भुइँभरि टुक्राहरु तितरबितर छन् । हरेक टुक्रामा मेरा अंश बाँडिएका छन् । कुनैमा निधार छ, कुनैमा कान, कुनैमा आँखा मात्र । म…
शायद ग्रीक मिथोलोजीमा हुनुपर्छ, मान्छे आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेका थिए । रोग थिएन, शोक थिएन, भोक थिएन । यी सारा विषाद एउटा बाकसमा बन्द थिए जसको रक्षा इपिमिथसले गरिरहेको थियो ।…